Ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Burgundy, any Frantsa | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Fialantsasatra any Eropa, Frantsa, General
Isaky ny firenena eropeana dia misy tanàna sy tanàna afovoany miafina izay mbola velona mandraka androany ary toerana tsara tarehy.
Frantsa, ohatra, dia mifantoka amin'ny toerana tena tsara any amin'ny faritany fantatra amin'ny hoe Burgundy na Bourgogne, amin'ny teny frantsay. Ny fahavaratra dia fotoana mety hifindra monina amin'ity faritra ity amin'ny firenena ka mamela anao hisafidy fohy anao ny tanàna tsara tarehy indrindra ao Burgundy.
6 ny Crusade faharoa.
Izy io dia faritany manan-tantara izay ao amin'ny Frantsa afovoany atsinanana ary ankehitriny dia departemanta efatra no mandrafitra azy: ny Gold Coast, Saône-et-Loire, Nièvre ary Yonne.
Ireo tany frantsay taloha dia nanjakan'ny foko celtic izay tamin'ny andron'ny romana dia nampidirina tao amin'ny fanjakana. Tamin'ny taonjato fahefatra, taorian'ny fotoanan'ny voninahitra romana, dia niseho teo an-toerana ny Burgundianina, foko alemanina tonga avy tany amin'ny Ranomasina Baltika.
Ny Burgundianina dia mipetraka eo amin'ny faritra andrefana Alpes ary resin'ny Franks avy eo. Izy ireo no fotoan'ny Fanjakan'ny Burgoña ary tamin'ny farany dia lasa ducat ireo tany ireo.
Amin'ny vanim-potoana medieval Burgundy dia feno monasitera kanto sy manan-danja ary io no sehatry ny ady ara-politika sy ny fifanolanana teo amin'ny tantaran'ny fanjakan'i Frantsa. Izany no mahatonga ny dia an-tongotra mamakivaky ireo tany misy ny toetr'andro mahafinaritra eto amin'ny ranomasina ireo dia tantara iray nandritra ny tantara.
Oh, ary ho an'ny gastronomy koa. Rehefa dinihina tokoa, dia ny toerana nahaterahan'ny Burgundy frantsay malaza.
Ity tanàna medieval ity dia hatsaran-tarehy hatsangana amin'ny tendrombohitra avo. Jereo ny Lakandranon'i Burgundy ary toa zavatra iray tsy hita tao amin'ny angano Brothers Grimm izany. Izy io dia manana trano mimanda natsangan'ny Duke Philippe-le-Bon, simba amin'ny ampahany ankehitriny fa miaraka amina trano fiangonana Gothic tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Tamin'ny taon-dasa, ho an'ny fahavaratra fotsiny ary taorian'ny asa maro dia nisy ivontoerana mpitsidika vaovao nosokafana tao amin'ny trano mimanda izay misokatra mandritra ny taona ankoatry ny daty nasionaly na ara-pinoana sasany ary adiny roa amin'ny alatsinainy atoandro.
Manodidina sy ambany, eny an-dalambe ao an-tanàna, misy kafe, fivarotana ary toe-tsaina tsy hay hadinoina tamin'ny vanim-potoana medieval.
Maro no mihevitra fa io no tanàna medieval tsara indrindra any Burgundy. Izy koa dia manana trano mimanda, eo am-baravarana ary lalana vato izay mitondra anao mankany am-piangonana.
Ny tsenan'ny tanàna dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary rakotra ary raha mandeha amin'ny fahavaratra ianao dia ho afaka mankafy ny fampisehoana omen'ny voninkazo isaky ny varavarankely isaky ny trano ao an-tanàna.
Ny fomba fahitana tsara indrindra dia avy any an-tampon'ny havoana izay ahitanao ny trano fiangonana, ny Chapelle-sous-Brancion, fiangonana romana taonjato faha-XNUMX nefa manintona voahodidina tanimboaloboka.
Izany dia tanàna antonontany tsara izay miafina any an-tendrombohitra be vato ary taloha dia tanàna mimanda tsara tamin'ny vanim-potoana medieval. Vato vita amin'ny vato ny zava-drehetra ary tranokala voaaro tsara izy io satria tena zava-dehibe amin'ny mponina izany.
Nahita ny sarimihetsika Juliet Binoche, Chocolate (tonga niaraka tamin'ny zanany vavy tao an-tanàna iray izy ary nanokatra fivarotana sôkôla, nanala baraka ny ben'ny tanàna)? Eny, naka sary azy io teto.
Androany dia misy galerie kanto maro ary raha tianao ny anise dia misy iray orinasa mpamorona baolina anise ao amin'ny Abbaye de Flavigny, Abbey Benedictine tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay nitahiry an'io fomba fahandro taloha io hatramin'izay.
Any an-tendrombohitra ihany koa ity tanàna antonony Burgundian ity, izay manatrika ny lohasahan'i Serein. Ohatra iray mazava amin'ireo tanàna mimanda amin'ity faritra ity izy satria tafiditra ao anaty andohalambo fantatra amin'ny anarana hoe Porte d'en Bas.
Fehezam-boninkazo eny an-dalambe, trano antenatenany, rindrina, sambo-tany, tranomaizina ambanin'ny tany, tohatra vato etsy sy eroa, tokotany miafina kely ary loharano efa ho roapolo manome rano. Fahagagana.
Rehefa miakatra ianao dia miditra lalina kokoa ao Montrèal ary mandalo vavahady faharoa, ny Porte d'en Haut, ao aoriany misy fiangonana sy fasana ary fomba fijery izay ahafahanao mijery ny lohasaha sy ny ony Serein tsara tarehy. Eto no misy ny trano mimanda ny 1599 naorin'ny soavalin'i
ny Crusade faharoa.
Ity lapa ity dia lava noho i Notre Dame de Paris ary ao anatin'ireo sary sokitra telo-habe dia aseho, miaraka amina tarehin-tsoratra ara-Baiboly sy hazo, natolotr'i Francis Francis I ny mpanjaka frantsay I.
Montrèal dia toerana mangina fitsidihan'ny maro an'ny Parisianina na dia fahavaratra aza, isaky ny alarobia, dia misy tsena maroloko, fety artisanina ary kaonseran'ny mozika. Raha manapa-kevitra ny handeha akaiky ianao dia afaka mitsidika an'i Vézelay, Avallon, ny Grottos d'Arcy na ny Castle Ancy-le-Franc.
Tanàna mimanda iray hafa misy trano taloha misy tafo vita amin'ny taila sy rindrina hazo. Ny kianja, ny arabe ary ny arcade dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'ny faha-XNUMX ary voaravaka fiangonana sy trano fiangonana.
Tanàna velona amin'ny volana aprily izy rehefa tonga ny mpitsidika voalohany ary misokatra amin'ny masoandro ny trano fisakafoanana sy ny kafe. Eo koa ny vondron'olona mpanakanto marobe izay manolo-tena handoko sy hampandehanana atrikasa tanimanga, poketra ary firavaka.
Raha manana fiara ianao dia afaka miakatra avy any Marcigny mankasitraka, rehefa manakaiky kokoa ianao, ny hakanton'ity tanàna antitra antonony ity eny amin'ny havoana.
Ilay tanàna dia anjakan'ny lapa t. Hugues, nanomboka tamin'ny taonjato faha-1 ary noho izany ny tranainy indrindra amin'ny faritra. Teraka Abbot manan-danja ao amin'ny Monastery of Cluny, Hugues de Semur. Misokatra ny lapa eo anelanelan'ny 15 martsa sy XNUMX novambra ary misy toerana maro hitsidihana ao an-tanàna sy ny manodidina.
Ireto misy ohatra vitsivitsy burgundy tsara tarehy saingy mazava ho azy fa tsy izy ireo ihany no tanàna na tanàna notsidihina: Dijon, renivohitry ny duchy taloha, dia tanàna mahafinaritra ary mbola kanto i Beaune miaraka amin'ireo tranobe manan-tantara sy arabe vatosoa.
Eo koa i Cluny miaraka amin'ny tranon-jaza manankarena sy matanjaka notorotoroin'ny Revolisiona frantsay.
-ary sary guedelon palace-
Afaka manampy ny Chateau de Guedelon, trano mimanda 1997 namboarin'ireo mpankafy tantara izay ahafahanao miakanjo akanjo lava sy milalao kely aza, ary trano roa tena izy, Ancy-le-Franc sy Tanlay.
Y Tsy hiala amin'ny Autun aho satria i Augustus no nanangana azy ary mbola manana harena sarobidy io nanomboka tamin'io. Araka ny hitanao dia tsy azo atao ny mijery indray ny zava-drehetra, noho izany ny toro-hevitro dia ny manofa fiara, ilaina raha te-hivezivezy ianao, ary manokan-tena hanao lisitr'ireo zavatra tsy tadiavinao, mamela varavarana misokatra foana hahitanao toerana vaovao.
Tsy hanenina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Frantsa » Ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Burgundy, any Frantsa
CM dia hoy izy:
Amin'ny taona manaraka dia te-hitsidika ireo tanàna mahafinaritra sy antonony ireo aho.
Valiny amin'i CM
Ny tanàna 5 mora indrindra any Etazonia